Wargelin: Daahfur Buug Cusub – Kasmo Newspaper
Wargelin: Daahfur Buug Cusub
Updated - January 10, 2018 10:37 am GMT
Muqdisho (Kasmo): Waxaa socda qab-qaabada iyo abaabul lagu soo bandhigayo Buug dhowaan soo baxay. Waxaa qoray Cabdi Xaashi Cabdillaahi, Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Daahfurka Buugga waxaa loo qabanayaa munaasabad weyn oo lagu soo bandhigayo. Waxaa si wadajir ah isaga kaashanaya Akademiyada Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta iyo Hey’adda Kasmo Publishing Limited, oo iyadu buugga daabacday.
Xubnaha labada Gole ee Baarlamaanka, Golaha Xukuumadda, Bulshada Rayidka, qorayaal, aqoonyahanno, jaamacado, ururada Bulshada, warbaahinta iyo shakhsiyaad caan ah, oo halabuurro iyo fannaaniin waaweyni ka mid yihiin ayaa lagu marti-qaaday munaasabadda lagu soo bandhigayo Buugga magaciisu yahay HAYBSO DHAQANKAAGA.
Buuggu wuxuu xambaarsan yahay aqoon ballaaran ee la xiriirta dhaqanka iyo luqadda dadka Soomaaliyeed, waxaana si weyn uga dhex muuqda hanka iyo hamiga qoraha ee ku jeeda horumarinta nolosha, nabadda iyo midnimada dadka Soomaaliyeed.
Xafladda Daahfurku waxay ka dhacaysaa Xarunta Akadeemiyada Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta, maalin Sabti 13 Jannaayo 2018. Saacadda: 10-ka Subaxnimo,
Isla markaas, dadka aan fursad u helin in ay yimaadaan Xafladda Daahfurka, waxay buugga ka heli karaan Maktabadda Akademiyada, ka soo horjeedka Taalada SYL. Waxaa kale oo la geyn doonaa buugga Bookshop-yada buugta laga iibsado ee Muqdisho ku yaal.